Mandaleel iyo duunyadiisa – Kaasho Maanka
Mandaleel wuxuu ku nool yahay kayn, hawd ama xir. Kaynta waxay ku taal har, bali ama war biyaysan. Waxaa kale oo kaynta ku nool duunyo ama xoolo qolo waliba le. Mandaleel wuxuu maalin walba ku qadeeyaa mid ka mid ah xoolahaas, biyaha Harada jiifana waa cabbaa.
Maalintii danbe waxaa soo galay kalkii ama xilligii Bakayle. Mandaleel waa faraxsanyahay oo wuxuu niyada ku hayaa hilibka macaan ee bakayle. Wuxuu fadhiyaa harada dacalkeeda wuxuuna sugayaa Bakayle in uu yimaado markaasna uu dhiigga ka cabo kadibna hilbihiisa feento. Dhaqanka iyo xeerarka Mandaleel waxaa weeye in maalin walba xoolaha midka uu cunayo ugu yimaado harada dacalkeeda si loogu dhib yareeyo hawsha cunidda.
Bakayle wuxuu joogaa maalintii lagu qadayn lahaa gooraysaduna waa is guraysaa, wuxuu isugu yeeray duunyadii wuxuu ku yiri: Waxaan rabaa in aan idiin sheego in maanta wixii ka dambeeya aan Mandaleel idan cuni doonin, way ku qosleen wayna ku jees-jeeseen waxay ku yiraahdeen: Bakayle ma libaaxa, maroodiga, geela iyo jeerta cunay baad adigu wax yeeli kartaa war soco Mandaleel asagoo xanaaqsan yaadan u tagine? Bakayle tag meeshii la wada yaqaanay gaar, hayeeshee waa bakayle waa tii layiri: intuu bur ku jiro buu bur kale daydaydaa, wuxuu maanka kuhayaa sidii Mandaleel meesha loo dhaafin lahaa iyo in nabad waartaa loo helo duunyada kaynta ku nool.
Bakayle wuxuu harada dacalkeeda ama jiinkeeda ka qoday hog dheer ujeedadadu waa in Mandaleel lagu rido hoggaas balse sidee loogu ridi karaa godka Mandaleel? Kadib markuu qoday godkii wuxuu ku shubay biyo uu ka soo jeexay haradii wuxuuna u dhaqaaqay dhankii Mandaleel. Mandaleel markuu arkay bakayle ayuu soo orday asaga oo xanaaqsan oo miciyaha lisanaya oo labada indhood casaan ama gaduud noqdeen, Wuxuu ka xanaaqay in bakayle soo daahay oo qadadii dib-dhacday waayo intii godka Bakayle qodayay waxaa jiray habsan iyo dibdhac.
Mandaleel: Maxaad u soo daahday oo intaas oo dhan ku maqnayd?
Bakayle: Mudane, libaax kale oo harada dhinaca kale jooga ayaa meesha igu xannibay oo wuxuu igu yiri anigaa ku cunaya saas baan u soo daahay.
Mandaleel oo caro meel dhiigiisa laga saro lahayn baa ku yiri maxaad tiri libaax baa harada jooga asaga oo la yaaban itus buu sii raaciyay? Bakayle oo hoosta ka qoslaya maankana ku haya halka Mandaleel ku danbayn doono ayaa ku yiri inakeen waakan halkaan joogee. Mandaleel oo dagaal u diyaarsan buu wuxuu dul-keenay godkii oo biyo ka buuxaan wuxuu tusay libaax godka ku jira oo biyaha ka dul-muuqda. Mandaleel asaga oo ay buuxdo caro iyo cadaawad buu libaxii ku booday biyaha ku dhexjiray, hayeeshee muusan garan in ay tahay maalintii ugu danbaysay. Bakayle asaga oo qoslaya ayuu Mandaleel ku aasay godkii asaga oo ciiddana dusha kaga shubay. Bakayle markuu hubsaday in hawshii dhammaatay wuxuu ku noqday kayntii wuxuuna u sheegay duunyadii wixii dhacay oo dhan iyo in Mandaleel fasax-dheer uu siiyay wax danbe oo walwal iyo cabsi ahna aysan jiri doonin. Halkaas wuxuu ku mutay bakayle ammaan, bogaadin iyo tixgalin u wada taal bahda reer-bakayle. Waa halkii uu lahaa Xasan Sheekh Muumin: Caqligii wanaagsani Itaal in uu ka roon yahay Bal eegoo u fiirsada.
I love this story. It is really interesting. Please write for us many other stories especially historical ones
W/Q: Warsame Jaamac 30th June 2019